Nihaza elefanta 385 ny amboara amboara amam-borona
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nihaza elefanta 385 ny amboara amboara amam-borona
Elefanta 385 farafahakeliny no nogiazana tamin'ny taona lasa, na izany aza vao nametraka ny governemanta Botswana quota isan-taona 400 elefanta hovonoin'ny mpihaza amboara ary manolo-kevitra ny hanitsy ny lisitry ny elefanta afrikanina CITES hahafahan'ny varotra ivoara.
"Nisy fitomboan'ny fihazana, ekenay", hoy i Kitso Mokaila (minisitry ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary, ny fiarovana sy ny fizahantany ary ny fizahan-tany) tamin'ny resadresaka nifanaovana CNN farany teo. Na izany aza, ny governemanta dia toa tsy manaiky tanteraka ny haavon'ny fihazana any ambanin'ny tany izay iainan'i Botswana ankehitriny na ny fihazana amboara no hampitombo izany.
Ny porofon'ny fiakarana efa ho 600% ny fatin'ny elefanta vaovao, nalaina an-keriny nandritra ny taona 2017-18, dia naseho tao amin'ny taratasy navoakan'ny mpiara-mianatra iray.Porofon'ny olan'ny fitadiavana elefanta mitombo ao Botsoana», Navoaka tao amin'ny diary Biology ankehitriny.
Betsaka ny fatin'ireo elefanta iharan'ireo niharam-boina tamin'ny fanjonoana olona hita nandritra ny fanadihadiana an'habakabaka tamin'ny taona 2018, nohamarinin'ny Dr Mike Chase sy ny ekipany Elephants Tanpa Border (EWB) ary samy nampiseho ireo famantarana mahatsiravina amin'ny fangalarana hazandrano. Ny karandohan'izy ireo dia alaina amin'ny famaky mba hamongorana ny vodiny ary ny vatany voadona dia rakotra rantsana mba hanafenana ara-bakiteny ny porofo. Ny elefanta sasany aza dia notapahina mihitsy ny hazondamosiny mba tsy hampandehandeha ireo biby izay miharihary fa mbola velona raha nesorin'ireo mpihaza an-keriny ny volon-dohany.
Ny haavon'ny fihazana hitan'ny EWB nandritra ny fanadihadian'izy ireo teny an'habakabaka dia mampatahotra tokoa. Chase (Mpanorina sy Tale - EWB) dia nilaza fa “ny porofo ato amin'ity gazety ity dia tsy azo iadian-kevitra ary manohana ny fampitandremana ataonay fa omby omby elefanta dia novonoin'ireo andian-jiolahim-boto tany Botswana; mila ajanontsika izy ireo alohan'ny hahatonga azy ireo hatanjaka kokoa.
Ny elefanta nalaina an-keriny hitan'i Chase sy ny ekipany dia omby matotra teo anelanelan'ny 30-60 taona niaraka tamin'ny tenda lehibe izay mitentina an'arivony dolara eo amin'ny tsena mainty.
Na ny mpihaza na ny mpihaza tropy dia samy manana ny safidiny tsara amin'ireo elefanta omby lehibe indrindra sy lehibe indrindra manana volo lehibe indrindra, izay omby indrindra mihoatra ny 35 taona. Ireto omby ireto dia zava-dehibe tokoa amin'ny lamba sosialy an'ny mponina elefanta, ny indostria safariy sary ary ho an'ny faharetana maharitra amin'ny indostrian'ny fihazana amboara.
Na izany aza, maharitra ve ny quota fihazana 400 elefanta, izay vao mainka mampitombo ny omby efa voatrabaka?
Ny totalin'ny omby matotra any Botswana dia manodidina ny 20,600, araka ny Fanadihadiana momba ny habakabaka EWB 2018. Ny tsara indrindra, 6,000 amin'ireo dia omby antitra noho ny 35 taona.
Rehefa manokatra ny vanim-potoana fihazana amboara ny filoha Mokgweetsi Masisi, mety ho very omby 785 i Botswana noho ny fihazana amboara na ny haza lambo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny 13% amin'ireo omby matotra sy mavitrika amin'ny firaisana dia esorina amin'ny isan'ireo elefanta isan-taona.
Ny mpihaza dia mino fa ny quota 0.35% amin'ny totalin'ny mponina, na manodidina ny 7% amin'ireo omby matotra, no "off-take" maharitra maharitra indrindra nefa tsy very ny haben'ny otrikaina tena mahafinaritra. Na izany aza, tsy jerena ny "off-take" fanampiny noho ny fanjonoana olona, ​​izay mahatonga ny quota any Botswana saika hampitombo avo roa heny an'io "maharitra" io.
Na dia tsy hitombo aza ny haza, dia 7-8 taona monja no hanafoanana ireo elefanta omby matotra, izay mazava ho azy fa tsy dia maharitra.
Ny lavarangana mpihaza mihaza dia hiady hevitra haingana fa misy ny fihazana olona satria navela ny fivarotana fihazana. Na izany aza, vao nanomboka nitombo nandritra ny fotoana kelikely ny fihazana olona tany Botswana nandritra ny taona 2017, telo taona feno taorian'ny nametrahana ny moratorium fihazana.
Ny fitomboan'ny mponina voajanahary dia hampihena ny fiantraikany io, fa any amin'ireo faritra nitrangan'ny fihazana sy ny fihazana olona dia hihena mafy ny isan'ny omby matotra, izay hisy akony amin'ny firafitry ny mponina elefanta.
Dr Michelle Henley (Tale, mpiara-manorina ary Mpikaroka fototra - Elephants Alive) dia nilaza fa "ny omby antitra dia manana fahombiazana bebe kokoa amin'ny paternity, mampiroborobo ny firaisan-kinan'ny vondrona, miasa ho mpanolo-tsaina ao anaty vondrona bakalorea, ary manindry ny fatin'ireo omby tanora".
Ireto farany dia manan-danja manokana, satria ny tsy fisian'ny omby antitra dia midika fa ny zaza dia tonga hozatra aloha loatra, ka mahatonga azy ireo ho mahery setra kokoa. Ity herisetra ity dia mety hiteraka fitomboan'ny Fifandonana Elefanta, ilay olana izay antenain'ny governemanta Botswana hampihena amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny fihazana amboara.
Ny "off-take" voafidy maharitra an'ny tuskers lehibe koa dia misy fiantraikany amin'ny fahasamihafan'ireo elefanta, izay mitarika ho an'ny mponina manana tenda kely kokoa sy na elefanta tsy misy volo aza. Ity fiovana amin'ny génetika ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny faharetan'ny elefanta maharitra ihany, fa koa misy vokany mivantana amin'ny faharetan'ny indostrian'ny fihazana amboara.
Ny famonoana elefanta tsy ara-dalàna ho an'ny ivoara dia tonga amin'ny ambaratonga tsy zaka manerana an'i Afrika, aiza ny isan'ny elefanta novonoina tsy ara-dalàna dia nihoatra ny fiterahana voajanahary. Tombanana izany elefanta iray no maty isaky ny 30 minitra.
Na dia efa nisy aza ny famonoana elefanta tany amin'ny ankamaroan'ny Afrika, ny elefanta ao Botsoana dia nitombo kokoa na tsy dia nilamina hatramin'ny fiandohan'ny taona 2010 izay misy mponina salama amina elefanta 126,000.
Hoy i Chase: "Matoky aho fa ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia afaka miara-miasa amin'ny fampiharana ny fepetra ilaina hanakanana ny fihazana. Amin'ny farany, hotsaraina i Botswana fa tsy manana olana amin'ny fangalaram-bola, fa noho ny fiatrehana izany. ”
SOURCE: Fitokisana ny Action Conservation
Fampitandremana momba ny fiarovana ny fiaramanidina: Aza apetraka amin'ny American Airlines ny fianakavianao